Kuze kube manje, imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali eJalimane ubhekwa indlela engcono ekwelapheni umdlavuza. Ngaphambi kokuqala le nqubo, umzimba lesiguli bahlolisise futhi ukucacisa kahle zemizimba yayo. Ongoti abasebenza ukwelashwa isiguli kufanele acabangele noma isiphi isici, kodwa yobudala kanye nezifo ezingamahlala khona ungeyena contraindication ukuba imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali.
izidakamizwa Chemotherapeutic kukhona ingxenye noma ngokuphelele ukubhubhisa umdlavuza limise ukukhula zamangqamuzana omdlavuza, abhubhise isakhiwo sabo. Namuhla, kunamabandla imithi ezingasiza izivikeli mzimba, ngaphezu ekulweni amangqamuzana omdlavuza.
Futhi e-Germany, odokotela bazama ukusebenzisa izidakamizwa, ukusetshenziswa okuyinto akakubangeli ezinzima engemihle. Lihambisana zisetshenziswe ngaso sonke isikhathi imithi yokuwunakekela nokuwuqinisa kuba nokwenzeka ukunciphisa ingozi yesifo esibi esiphansi.
Ukwelashwa ngamakhemikhali nokushiswa eJalimane inikezwa okusekelwe uhlobo esiteji yesimila ukuze kuzuzwe imiphumela elandelayo:
Ukubhujiswa umdlavuza izimila;
Imisa ukukhula isimila cells nokubhujiswa izimila metastatic;
• Ukunciphisa ubukhulu isimila belungiselela ukuhlinzwa;
Ukubhujiswa ostatkovyh isimila esibulalayo esikhula ezisele ngemuva kokuhlinzwa.
Ngokuyinhloko, impatho chemotherapeutic eJalimane iqondiswa lihambisana kokungenela hirurgcheskim futhi welashwa ngemisebe. Nokho, zikhona izimo lapho ebekiwe nokwelashwa ngamakhemikhali njengoba eyinhloko futhi okuwukuphela kwendlela yokwelapha okungenzeka umdlavuza.
Izindlela ngamakhemikhali eJalimane:
Emaphakathi vein - isidakamizwa iqondiswa ngokusebenzisa ipayipi ibe subclavian umthambo omkhulu washiya khona isikhathi esithile;
I-peripheral vein - isidakamizwa iqondiswa nge inaliti mncane ku umthambo isandla;
I Umthambo, okuyinto isimila esibulalayo ;
Ukwamukelwa izidakamizwa ngomlomo njengoba e amaphilisi noma amaphilisi;
Wasekhaya: izidakamizwa imbondela ukuze isikhumba amafutha (noma isixazululo);
Ngo umjovo ngaphansi kwesikhumba, imisipha noma ku isimila, uma kungenzeka;
Ngokuvamile ukusebenzisa izidakamizwa emthanjeni. Kwenzeka ukuthi ukwakheka kwamakhemikhali kumele ijovwe emthanjeni noma Umthambo ngokusebenzisa ipayipi izinsuku eziningana ngaphandle kokuphazamiseka. Esimweni esinjalo kubalulekile abalawula ubukhulu ekwakhiweni okuholela phezu imithi oyinikiwe, asebenzisa futha ozinikele.
Izidakamizwa esilawulwa ngezindlela ezahlukene: nsuku zonke, masonto onke futhi njalo ngenyanga. izidakamizwa ekuphathweni Yiqiniso ngokuvamile ihlala izinsuku ezinhlanu, nge esingaba izinsuku ezingamashumi amabili nanye. ukubambezeleka eside enjalo kuyadingeka ukuze umzamo ekululameni kwesiguli futhi lonke umzimba.
Ngezinye izikhathi odokotela German ukuqhuba izifundo yesibili ngamakhemikhali emva kokwelashwa ukuvimbela Ukuphinda. Kuyaphawuleka ukuthi ukuthatha himiterapii Yiqiniso kubalulekile ukugcina ngezikhawu ocacile phakathi nesimiso, njengoba umphumela angeke izuzwe. Nokho, kwenzeka lapho Yiqiniso imiswe okwesikhashana isikhathi esithile. isinqumo esinjalo kungase kuthathe udokotela kuphela ekwelapheni, ngokusekelwe imiphumela jikelele igazi ukuhlaziywa.
ukwelashwa Oncology eJalimane kukhona isizukulwane esisha imishini eliphezulu. izikhungo Medical zuza igunya emhlabeni, ngenxa nobuchwepheshe bale odokotela kanye nokwethulwa zokwelapha ezintsha in Oncology. Ukwelashwa ngamakhemikhali nokushiswa course nezikhungo zezokwelapha German kuqinisekisa ukusetshenziswa kwemikhiqizo ethuthukile nobuchwepheshe besimanje, ngenxa okuyinto, wokwelapha isifo somdlavuza kubhekwa indlela ephumelela kakhulu uma ziqhathaniswa ukwelashwa kwamanye amazwe. Futhi uthi ukuthi ithemba yokutakula, ngosizo ngamakhemikhali eJalimane, uyofaneleka.
Pyatigorsk sibhedlela nge Radon zokugeza: ukubuyekeza zokulala ethandwa
Lapho isemikholoni emshweni: izici imithetho zokuloba